उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ, राति हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध – Himalaya Television
उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ, राति हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध
२०७७ साउन १६ गते ७:४५
१६ साउन, २०७७ काठमाडौं । सरकारले आजबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गर्ने भएको छ। त्यस्तै राति हिँडडुल गर्नसमेत रोक लगाएको छ।
सरकारले साँझ ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाएको हो । उपत्यका प्रवेश गर्ने यात्रुमा चेकजाँचका क्रममा ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको भन्दै रातको समयमा उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवा र ढुवानीबाहेक आजबाट लागू हुने गरी प्रत्येक दिन साँझ ७ बजेबाट बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका प्रवेश नाकामा यात्रुहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गराउने’ भनिएको छ ।
गृहले नाकाहरूको आवागमनमा पूर्ण निगरानीका साथ चेकजाँचको आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । उपत्यकाबाहेकका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि अत्यावश्यक कामममा बाहेक अन्तरजिल्ला सवारी आवागमन पास जारी नगर्न गृहले निर्देशन दिएको छ ।
विनापास अन्तरजिल्ला आवागमनमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न गराउन सबै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उपत्यका प्रतिबन्ध हिडडुल
One thought on “उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ, राति हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध”
prakash khatri says:
सरकारले आफ्नो मात्र सुरक्षा गर्ने भाे जनताकाे सुरक्षा खाेई काठमाडौमा मात्र कडाई गरेर हुन्छ ?? खाेई देशको सिमानामा कडाई गरेकाे काठमाडौ बाहेकका मानिस जनता हाेईनन ???